အိမျထောငျတဈခု တညျဆောကျဖို့ဆိုရငျ ကလေးအတှေးအရငျဆုံး ထားပဈခဲ့လိုကျပါ ။ - Tameelay
အိမျထောငျဖကျ . . .
အိမျထောငျမှု ဘုရားတညျ ဆေးမငျရညျ စုတျထိုး ဤသုံးမြိုး ခကျြမပိုငျရငျ နောငျပွငျရနျ ခကျသညျ့အမြိုး တဲ့ ။
အိမျထောငျတဈခု တညျဆောကျဖို့ဆိုရငျ ကလေးအတှေးအရငျဆုံး ထားပဈခဲ့လိုကျပါ ။ ငါ နဲ့ ရပွီးသှားရငျ သူ့အခြိုးတှေ ပွောငျးလာမှာပါဆိုတဲ့ ကလေးဆနျဆနျအတှေးတှေ အရငျဆုံး ဖြောကျပဈလိုကျပါ ။
အိမျထောငျဖကျ . . . မိနျးကလေးတဈယောကျအတှကျ အိမျထောငျဖကျရှေးခယျြရတယျဆိုတာ မဲနှိုကျရသလိုပဲတဲ့ ကောငျးတယျ ဆိုးတယျ ဒီနှဈမြိုး နှဈခုတညျးက တဈခုတော့ ရမှာပဲလေ ။
ကံကိုခညျြး အလုံးစုံ အပွဈတငျပုံခလြို့မရဘူး ကိုယျနဲ့လဲ အမြားကွီး သကျဆိုငျပါတယျ ။
အိမျထောငျပွုတယျဆိုတာ မိနျးကလေးတဈယောကျအတှကျတော့ ဘဝတဈခုလုံးကို ပုံအပျပဈလိုကျရတာလေ အခြိနျတှေ လှတျလပျခှငျ့တှေ ဘဝတှေ အရာအားလုံးကို လူတဈယောကျရဲ့လကျထဲကို ဝါးကှကျ အပျလိုကျရတာမြိုးပေါ့ ။
ကောငျးခွငျးတှပေဲ ရှိရှိ ဆိုးခွငျးတှပေဲ ရှိရှိ ကိုယျတဈယောကျတညျး ခါးစညျးခံရမှာ ။ ဒါတှကွေောငျ့ အိမျထောငျဖကျကို ရှေးခယျြတဲ့အခါ နှလုံးသားတဈခုတညျးနဲ့ မလုံလောကျတော့ဘူး ။
နောငျတဈခြိနျဆိုတဲ့ အတှေးတှေ အမြားကွီး ရှိလာဖို့လဲ လိုပွီ ခဈြနရေငျ ပွီးပါပွီ ဆိုတဲ့ တယူသနျနဲ့ မဆုံးဖွတျပါ နဲ့
အိမျထောငျတဈခုမှာ အခဈြထကျ ပိုပွီး အရေးပါ အရာရောကျတာတှေ အမြားကွီး ရှိသေးတယျ ပွီးတော့ ငါ နဲ့ ရပွီးသှားတဲ့အခါ သူ ပွုပွငျ ပွောငျးလဲလာမှာပါဆိုတဲ့ အတှေး ဘယျတော့မှ မတှေးနဲ့ ရညျးစားဖွဈတုနျးက အပေါငျးအသငျးမကျတဲ့ ယောကျြားတဈယောကျ အိမျထောငျကသြှားတဲ့အခါလဲ အပေါငျးအသငျးမကျနဥေီးမှာပဲ လကျပါတတျတဲ့ ယောကျြားတဈယောကျက လကျပါနဦေးမှာပါ
သူခဈြနရေငျကို ဖွဈပါပွီဆိုပွီး အရာရာကို ခါးစညျးခံမယျဆိုတဲ့ အတှေး အခြိနျ ဘယျလောကျကွာတဲ့အထိ သညျးခံထားနိုငျမှာလဲ နောငျတဈခြိနျ ကလေးတှေ ရလာတဲ့အခါ ဆိုတဲ့ အနာဂတျကွီးကို တှေးကွညျ့ကွညျ့ပါ ကိုယျငိုနရေတာ ပွဿနာမဟုတျဘူးဆိုရငျ ကိုယျ့ကလေး ကိုယျ့သှေးသားတှေ အဆငျမပွတော ပွဿနာပဲလေ
ကောငျးလဲ စံ မကောငျးလဲ ခံ ဆိုပွီး မကျြလုံးစုံမှိတျပဈလိုကျလို့တော့ ရပါတယျ ။
လူ့ဘဝဆိုတာ ရခဲလှတဲ့ အရာလေ ဒူးနဲ့ မကျြရညျသုတျရတဲ့ ညတှေ ပိုပွီး မြားလာတဲ့ ဘဝမှာတော့ မနစေခေငျြဘူး ။ အိမျထောငျတဈခု ပွုလိုကျဖို့ဆိုတာ လှယျလှယျလေးပါ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီ အိမျထောငျရေးကို သာယာအောငျ မွဲအောငျ တညျဆောကျဖို့ကြ အမြားကွီး ပိုခကျတယျ
ဒါတှကွေောငျ့ အိမျထောငျဖကျကို ရှေးခယျြတဲ့အခါ နှလုံးသားကွီးသကျသကျ နဲ့ သူဘာပဲဖွဈဖွဈ ဖွဈပါတယျ ဆိုတဲ့ ကလေးအတှေးနဲ့ မရှေးခယျြနဲ့ နှလုံးသားကိုလဲ မေးပါ ဦးဏှောကျကိုလဲ မေးပါ ပွီးရငျ အခြိနျတဈခုထိတော့ စောငျ့ကွညျ့ပါ လူ့အကွောငျးဆိုတာ ကွာကွာပေါငျးလေ ပိုသိလာလပေဲလေ ။
ကိုယျရှေးခယျြပွီးသှားရငျတော့ ကိုယျရှေးထားတဲ့လမျး ဆိုးဆိုးကောငျးကောငျး ဆကျပွီးလြှောကျရမှာက ကိုယျ့တာဝနျပါပဲ ရှေးခယျြခှငျ့ ရှိနတေုနျးမှာ အကောငျးဆုံးဖွဈမယျ့ ရှေးခယျြမှုမြိုးပဲ ဖွဈပါစေ ။
အိမ်ထောင်ဖက် . . .
အိမ်ထောင်မှု ဘုရားတည် ဆေးမင်ရည် စုတ်ထိုး ဤသုံးမျိုး ချက်မပိုင်ရင် နောင်ပြင်ရန် ခက်သည့်အမျိုး တဲ့ ။
အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင် ကလေးအတွေးအရင်ဆုံး ထားပစ်ခဲ့လိုက်ပါ ။ ငါ နဲ့ ရပြီးသွားရင် သူ့အချိုးတွေ ပြောင်းလာမှာပါဆိုတဲ့ ကလေးဆန်ဆန်အတွေးတွေ အရင်ဆုံး ဖျောက်ပစ်လိုက်ပါ ။
အိမ်ထောင်ဖက် . . . မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ရတယ်ဆိုတာ မဲနှိုက်ရသလိုပဲတဲ့ ကောင်းတယ် ဆိုးတယ် ဒီနှစ်မျိုး နှစ်ခုတည်းက တစ်ခုတော့ ရမှာပဲလေ ။
ကံကိုချည်း အလုံးစုံ အပြစ်တင်ပုံချလို့မရဘူး ကိုယ်နဲ့လဲ အများကြီး သက်ဆိုင်ပါတယ် ။
အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်တော့ ဘ၀တစ်ခုလုံးကို ပုံအပ်ပစ်လိုက်ရတာလေ အချိန်တွေ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ဘ၀တွေ အရာအားလုံးကို လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲကို ဝါးကွက် အပ်လိုက်ရတာမျိုးပေါ့ ။
ကောင်းခြင်းတွေပဲ ရှိရှိ ဆိုးခြင်းတွေပဲ ရှိရှိ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ခါးစည်းခံရမှာ ။ ဒါတွေကြောင့် အိမ်ထောင်ဖက်ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ နှလုံးသားတစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်တော့ဘူး ။
နောင်တစ်ချိန်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ အများကြီး ရှိလာဖို့လဲ လိုပြီ ချစ်နေရင် ပြီးပါပြီ ဆိုတဲ့ တယူသန်နဲ့ မဆုံးဖြတ်ပါ နဲ့
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ အချစ်ထက် ပိုပြီး အရေးပါ အရာရောက်တာတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ် ပြီးတော့ ငါ နဲ့ ရပြီးသွားတဲ့အခါ သူ ပြုပြင် ပြောင်းလဲလာမှာပါဆိုတဲ့ အတွေး ဘယ်တော့မှ မတွေးနဲ့ ရည်းစားဖြစ်တုန်းက အပေါင်းအသင်းမက်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့အခါလဲ အပေါင်းအသင်းမက်နေဦးမှာပဲ လက်ပါတတ်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်က လက်ပါနေဦးမှာပါ
သူချစ်နေရင်ကို ဖြစ်ပါပြီဆိုပြီး အရာရာကို ခါးစည်းခံမယ်ဆိုတဲ့ အတွေး အချိန် ဘယ်လောက်ကြာတဲ့အထိ သည်းခံထားနိုင်မှာလဲ နောင်တစ်ချိန် ကလေးတွေ ရလာတဲ့အခါ ဆိုတဲ့ အနာဂတ်ကြီးကို တွေးကြည့်ကြည့်ပါ ကိုယ်ငိုနေရတာ ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ကိုယ့်ကလေး ကိုယ့်သွေးသားတွေ အဆင်မပြေတာ ပြဿနာပဲလေ
ကောင်းလဲ စံ မကောင်းလဲ ခံ ဆိုပြီး မျက်လုံးစုံမှိတ်ပစ်လိုက်လို့တော့ ရပါတယ် ။
လူ့ဘ၀ဆိုတာ ရခဲလှတဲ့ အရာလေ ဒူးနဲ့ မျက်ရည်သုတ်ရတဲ့ ညတွေ ပိုပြီး များလာတဲ့ ဘ၀မှာတော့ မနေစေချင်ဘူး ။ အိမ်ထောင်တစ်ခု ပြုလိုက်ဖို့ဆိုတာ လွယ်လွယ်လေးပါ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ အိမ်ထောင်ရေးကို သာယာအောင် မြဲအောင် တည်ဆောက်ဖို့ကျ အများကြီး ပိုခက်တယ်
ဒါတွေကြောင့် အိမ်ထောင်ဖက်ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ နှလုံးသားကြီးသက်သက် နဲ့ သူဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ကလေးအတွေးနဲ့ မရွေးချယ်နဲ့ နှလုံးသားကိုလဲ မေးပါ ဦးဏှောက်ကိုလဲ မေးပါ ပြီးရင် အချိန်တစ်ခုထိတော့ စောင့်ကြည့်ပါ လူ့အကြောင်းဆိုတာ ကြာကြာပေါင်းလေ ပိုသိလာလေပဲလေ ။
ကိုယ်ရွေးချယ်ပြီးသွားရင်တော့ ကိုယ်ရွေးထားတဲ့လမ်း ဆိုးဆိုးကောင်းကောင်း ဆက်ပြီးလျှောက်ရမှာက ကိုယ့်တာဝန်ပါပဲ ရွေးချယ်ခွင့် ရှိနေတုန်းမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် ရွေးချယ်မှုမျိုးပဲ ဖြစ်ပါစေ ။